Wararka ka yimid MobileMapper Field iyo MobileMapper Office - Geofumed
Sebtember, 2011 GPS / Qalabka, tabo cusub
Bishii Juun ee 2011 qaababka cusub ee software loo isticmaalo qalabka Ashtech, sidaas darteed iibsashada qalab cusub kuwaas oo laga yaabo in aan la rakibin. Anigu waxaan maqaalkani ku muujinayaa meesha lagu soo dejin karo, iyo sidoo kale sifooyinka ugu cusub ee cusbooneysiinta ah:
Xaaladda MobileMapper Field, version 2.03 ayaa la sii daayay. Tani waa midka loo isticmaalo GPS MobileMapper 6, MobileMapper 10 iyo MobileMapper 100, dhammaan on Windows Mobile.
Waxaa ka mid ah abaalmarinta lagu xusay:
Taageerid MobileMapper 10, oo ka mid ah kuwa ugu caansan ee tixgelinaya in tani ay siin doonto karti dheeraad ah oo loo leeyahay cayaarahan.
Xulashada si aad u aragto heer sare iyo dulqaad (HRMS iyo VRMS) kuwaas oo horeba loogu baahnaa qalabkan.
Ikhtiyaarka ah in uu ku celceliyo sifooyinka, aad u macquulsan xaalada sawirada ama dhismayaasha leh dabeecadaha la midka ah, sida noocyada isticmaalka, fasalka, tayada ay isku mid noqon karto.
Sifooyinka qasabka ah. Markaad abuurayso lakab, waxaad dhisi kartaa sifooyinka loo baahan yahay, maaha inay u ogolaadaan marinka xuduuda xigta illaa inta xogtan aan la buuxin.
Xirfadaha shaqada Kuwani waa sheybaaro, kuwaas oo kaydin kara beeraha caadiga ah, kuwaas oo aan loo qoondeeynin mar kasta oo shaqo la bilaabo; xiiso, waan awoodaa.
Magaca Job ayaa hadda lagu arkay shaashadda ugu muhiimsan, taas oo fududeyneysa inaad iska ilaaliso jahwareerka ama aad u tagto si aad u aragto shaqada ay tahay isticmaalka.
Taageero si loo muujiyo Khariidadda Furan sida lakabada map-ka, oo leh xiriir Internet.
4D qaabka taageerada faylka
Tilmaameeyaha shaashadda marka qaabka SBAS la dhaqaajiyo
Taageerid Foomka ESRI AXF, inkasta oo versionkani uusan taageeri (cusboonaysiin) taariikhda / waqtiga garoonka.
Hadda, helitaanka nidaamka NMEA looma joojiyin dekedda COM2 marka ay ka baxdo. Waxay igu dhacday, madaama aan ku haboonayn sidan GvSIG Mobile, taas oo keentay signalka GNSS oo lagu qaabeeyey MobileMapper Field ama ArcPad inay lumiso.
ITRF waxay isku-duweysaa ikhtiyaarka bedelka ah ee qaabka SBAS
Tilmaamaha isbeddelka isbeddelka ee Go To Habka MobileMapper Field
Ka mid ah cayayaanka, dhibaatada waxaa lagu saxay madaxa feylka DBF oo leh dhul ballaaran
Haddii ay dhacdo Xafiiska MobileMapper, ayaa bilaabay version 2.1, tani waa softwareka loo isticmaalo si loo abuuro khariidadaha asalka, xog ururinta iyo dib u-dhiska xogta. Wixii nidaamyada Windows XP ActiveSync ayaa loo baahan yahay, Windows 7 waa lagama maarmaan ahayn.
Isbeddeladaan soo socda ayaa lagu sheegay qoraalkan:
Waad kari kartaa faylal dhowr ah isla waqti isku mid ah, midna mid ma aha
Amarka cusub ee lagu cusbooneysiinayo faylasha qaabka
Taageero loogu talagalay qaabka 4D qaabka iyo qaabka M
Wax soo saarka macluumaadka xogta ATOM RNX
Hadda waxaad samayn kartaa xogta dib-u-marinta MobileMapper 10
Shaqeynta cusub si loo cusbooneysiiyo faylasha isticmaalka caadiga ah ee wareejinta xogta u dhexeeya qalabka iyo PC
Taageerida maareynta casriyeynta version, adigoon dib u dhicin xoqin
Nidaamyada isgaarsiinta ee shiineyska iyo laba caleemood oo ku jira sifooyinka Japan ayaa la cusbooneysiiyay
Halkan waxaad kala soo bixi kartaa:
MobileMapper Field 2.03, loogu talagalay MobileMapper 100, Isbaanish
MobileMapper Field 2.0 (2.03), loogu talagalay MobileMapper 10, Isbanish
Cusbooneysiinta Xafiiska MobileMapper waxay u muuqataa inay tahay mid aad u adag, sidaas darteed ma dhicin in la tirtiro.
Marka laga hadlayo MobileMapper Field, khadka cusubi wuxuu qabaa shaqooyinka oo idil, oo ay ku jiraan dib u habaynta koodh aqoonsiga kumbuyuutarka ama GLONASS. Inkasta oo ay tahay inaad ka taxadarto MobileMapper 6, taas oo sida muuqata aan la tijaabin.
Post Previous«Previous GGL luqadda geoprocessing heli karaa gvSIG
Post Next PlexEarth, kaas oo keenaya version 2.5 ee Google Earth for imagesNext »
6 Jawaab ah "Wararka ka yimid MobileMapper Field iyo MobileMapper Office"
Marcelo Oliveira isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan haysannaa umul-raacdeedka guurguura ee '100'. Sidee loo soo dejista laadhuuda cayriin ah ama PC Windows Vista?
Ha ku xirin kumbuyuutar ama kumbuyuutar
Yadira Prieto isagu wuxuu leeyahay:
Anigu ma haysto koodhka firfircoon ee MOBILEMAPPE6.0 tan waxaa ka helay jaamacadaydii, laakiin hadda ma ay helin cdd
xayiraad isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan haystaa khariidad xawaaladeed oo 6 laakiin codadka furfurista ee khariidadaha moobaylka ayaa dhuuntay qaabkii aan u soo kabsan lahaa codsiyada ama ii soo iibsaday mahadsanid cusub ama barnaamij kale oo iga caawin lahaa inaan isticmaalo qalabka, mahad
Uma maleynayo in lagu xiri karo Windows CE.
Oscar Vargas Rosales isagu wuxuu leeyahay:
a magellan cx gps daaqadaha CE; su'aasha waa aad ku rakibi kartaa MobileMapper Field
Hector Suarez isagu wuxuu leeyahay:
Waad ku mahadsan tahay tilmaamaha kooxdaada, waxaan kaa codsanayaa ra'yiga aan ka heli karo koorso wadista kooxdan